Ukutshintshwa okanye Ukuphuculwa kweFreeid Fluid Cooler
I-Trans cooler ilungele ukuphuma. ifoto ngu Matt Wright 2014
Ukuba ukwenzile uphando kwaye wagqiba ekubeni ufuna i-transfroster transmission ekhudlwana, okanye i-transferensi yakho yangoku ipholile ifake ukuvuza, kuya kufuneka ufake entsha. Iindaba ezilungileyo kukuba ngokwenene ngumsebenzi olula kakhulu onokuyenza kwindlela yokuhamba kunye nezixhobo eziqhelekileyo. Ngesizathu esithile xa siqala ukuxubusha ukulungiswa kokudluliselwa kwee-transmission , nakwimishini yokuqalisa ekhaya iqala ukukhutshwa kancinci. Kuyaqondakala ukuba kuqwalaselwe ngaphakathi ngaphakathi kokuhamba ngokuzenzekelayo yindawo echaphazelekayo. Kodwa ukufakelwa okupholileyo okanye ukuphucula (okokukufakela, kunjalo) yenye yemisebenzi elula ukuyenza kwinkqubo.
Yintoni oya kuyidinga:
Umgca wendlela okanye i-wrench yokuphela yesikhala
I-1/4 "i-ratchet yokuqhuba i-drive
Indawo yokugcina amanzi
Funda ukuze ususe i-transferensi yakho yangaphambili yokuphefumula kwaye ufake enye entsha.
Susa iSikrini seRetainer
Susa izicatshulwa zokugcina ezigcina umgca womgca ngokukhuselekileyo kwindawo. umfanekiso ngo-Matt Wright, ngo-2014
Ukususa i-cooler transmission akuyona into enzima kwizithuthi ezininzi. Into enhle ngamaloli kukuba ininzi inkulu kakhulu, kwaye ineendawo ezininzi zezinto ezinjenge-cool coolers. Oku kuthetha ukususa nokutshintsha kwawo akuyona enye yemisebenzi efuna i-yoga.
Amanyathelo adweliswe apha ngezantsi acinga ukuba uye wahlutha iinqwelo zeloli yakho ezifihla indawo yokupholisa. Kwiinkolisi ezininzi, njenge Chevrolet Silverado, udinga kuphela ukususa i-grill ukuze uyifinyelele.
Isinyathelo sokuqala ekususeni ipholizi ukukhupha umgca wokuhambisa umbane kwi-cooler. Kuya kuba nemizila emibini exhunywe kwi-cooler, igalelo kunye nesiphumo. Akukhathali ukuba yiyiphi inqakraza kuqala. Imigca ikhuselekile ekugqibeleni yodwa nge-plastiki yokugcina i-slides phezu komgca we-nut ophethe umgca endaweni. Olu khuseleko lugcina lukhusela ukuxhamla ngokwawo. Kumele kukhutshwe phambi kokuba unyule umgca womgca kwicala ngalinye lepholile. Kulula ukukususa, zikhuphe ngaphandle kwendlela kunye ne-screwdriver.
I-TIP: Kunokwenzeka ukutshintsha i-cooler transmission kunye nelahleko encinci. Umsebenzi oqinileyo uya kuthetha nto encinci okanye ayikho ukuhlaziywa kombane ngaphambi kokukwazi ukuqhuba kwakhona.
Nqamula i-Transmission Fluid Lines
Unqamle ukungena kunye nokuphuma kwimizila ehluthayo usebenzisa umkhonto ophezulu. umfanekiso ngo-Matt Wright, ngo-2014
Ngokukhutshwa kwimiqhopholo yokukhusela, thumela i-tray yakho yokubambisa kwindawo ethile kwindawo epholileyo. Ukuba unomncedisi unako ukubamba iqhosha lokubamba ngokukhawuleza ngaphantsi kwephosta yokubamba yonke into ekhoyo yamanzi. Ukuba akunjalo, ungakhathazeki. Kuyinto encane kakhulu kodwa ayingozi kakhulu.
Ukusebenzisa umgca wecala ukuba unayo, okanye umkhonto wokuphela ovulekile ovulekile ukuba awuyiyo, khulula umgca womgca kwimigca ehambayo yomzila ohambayo kwaye uphumelele. Imigca ayikho into enqabileyo, kodwa qaphela ukuba ungabakhuseli. Umgca wokuhlanjululwa kuya kufuneka ukuba utshintshwe, kwaye loo msebenzi awunamsebenzi kubo bonke.
I-TIP: Ukufudumala kwamanzi kungalimaza iiplastiki kunye nepeyinti ekugqibeleni kwiloli lakho. Khusela iindawo ezingabonakaliyo phambi kokuba unqamule imigca yakho.
Ukususa i-Transmission Cooler
Susa ii-bolts ezincinci ezifakela ibhonki ephakamileyo kwinkxaso engundoqo. umfanekiso ngo-Matt Wright, ngo-2014
Ngemigca ekhutshiwe ngoku ulungele ukufumana i-cooler endala khona. I-cooler iqhotyoshelwe kwi-bracket, eqhotyoshelwe kwinkxaso yakho yangundoqo ye-radiator. Susa i-screws okanye i-bolts encinci ifake i-bracket ekhulayo kwinkxaso engundoqo kwaye uya kukwazi ukutsala i-transmission ferser out. Emva koko unako ukususa ibakaki kuba unokuyidinga ukunyusa ukupholisa kwakho entsha, kuxhomekeka ukuba ngaba uthuthukisiwe kwi-transit duty duty cooler okanye wenza nje ukutshintshwa.
Ukufakela ukutshatyalaliswa okutsha kwefayili: Njengoko ilizwi lihamba, ukufakwa kukususwa kokususwa. Ukuba kunokwenzeka, qalisa ukuzalisa i-cooler entsha ukuze kubekho umoya omncinci kwinkqubo yokuhambisa umbane. Emva kokufakelwa kunye nokuqinileyo, qhawula injini uze ukhangele ukuvuza. Oku kunika ithuba lokuba naziphi na iipokotshi zomoya eziphumayo kwaye ungakhangela izinga lakho lomnayile ngokuchanekileyo.
Umsebenzi omhle. Usuyilondoloze inqwaba yemali!
Indlela yokulungisa iWindows Windshield yakho
Uxilongo lwe-Popping Sound evela kwiInjini yakho
I-Basic Home-Home Car Tips Ukulungisa Iingcebiso
Imihla yokuzalwa kunye neengcaphuno zabahlobo
Iinkqubo zokuBheja ezintle
I-Stupa - I-Archaeology ye-Architecture Engcwele yeBuddhism
Amass Boston Admissions
Ukuguqulela 'Isiqingatha' ngesiSpanish
Thesis: Inkcazo kunye neMimiselo yoBumbe
UMoya oyiNgcwele Uyingxenye yesithathu ehlukeneyo kuThixo